Nescafe Red Cup Instant Coffee Jar 100g – SUNNY eSTORE
Nescafe Red Cup Instant Coffee Jar 100g
SUNNY Everyday StoreSKU: 8850124023681
2,100 Ks 4,200 Ks
ထူးကဲစွာ ရနံ့မွှေးပြီး ပြင်းသည့်အရသာသည် လူများအား အနီရောင်မတ်ခွက်ဆီသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ထိုအချိန်လေးကို ခံစားကြရန် အမြဲဆွဲဆောင်လေ့ရှိသည်။ NESCAFÉ Red Cup သည် သင်၏ကော်ဖီအား သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်၊ နည်းလမ်းနှင့် စတိုင်တို့ဖြင့် ဖျော်စပ်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ခါးခါးပြင်းပြင်းလေး လား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ငြိမ့်ညောင်းပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိစွာဖြင့်လား - သင် နှစ်သက်သလို သုံး ဆောင်နိုင်သည်။
NESCAFÉ အတွက် အထူးဖော်ထုတ်ထားသည့် Enhanced Recovery Aroma သည် NESCAFÉ ၏ အစေ့ တိုင်းတွင် လှော်ထားသည့်ကော်ဖီ၏ စစ်မှန်သည့်မွှေးရနံ့ကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး၊ ပုလင်းအား သင် ဖွင့် သည့်အခါတိုင်း သို့မဟုတ် ကော်ဖီအား ရေနွှေးနှင့်ရောသည့်အခါတိုင်း သင်၏အိမ်တွင် ပျံ့နှံ့နေစေသည်။ ထူးကဲ့သည့်မွှေးရနံ့နှင့် ပြည့်ဝသည့်အရသာတို့ဖြင့် NESCAFÉ သည် သင် ကော်ဖီသောက်သည့်အချိန် လေး၏ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ၁၀၀% စစ်မှန်သည့် သဘာဝကော်ဖီ၏ ထူး ခြားမှုဖြစ်သည်။
အရေအတွက် - Nescafe Red Cup ၁ ပုလင်း
Enhanced Recovery Aroma developed uniquely for NESCAFÉ, allows preserving genuine aroma of roasted coffee in every granule of NESCAFÉ and releasing it at your home every time you open the bottle and when the coffee is mixed with hot water. With rich aroma and full taste, NESCAFÉ increases pleasure of your coffee moment… This is the unique of real 100% natural coffee.
Includes: 1 jar of Nescafe Red Cup